Minn Lan @ Baho Street | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 4.4 Decoration : 3.6 Service : 3.2
Baho Street, Sanchaung
Activities on Minn Lan @ Baho Street
Lynn Niño reviewed Minn Lan @ Baho Street4years ago
တစ်​ခုခု မှာပြီးရင်​ အရမ်းကြာပီး၊ စနစ်​မကျပါ။ ​​နောက်​မှ​ရောက်​တဲ့သူ​တွေ အရင်​ရသွားတာမျိုး။ စာပွဲထိုး တစ်​ခါ​ခေါ်ဖို့ အသည်းအသန်​ ကြိုးစားရတာမျိုး . . .
Shine Lay is eating at Minn Lan @ Baho Street4years ago
tznaing reviewed Minn Lan @ Baho Street4years ago
Customer service အရမ်းညံ့ပါတယ်။ ၆ မိုင်ခွဲ ကဆိုင်နဲ့များတစ်ခြားစီပဲ။ အစားအသောက်ကလည်း မလတ်ဆတ်ပါ။ ပူပူနွေးနွေးစားရတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။နေရာလေး ကောင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။
linnlinnhtet reviewed Minn Lan @ Baho Street4years ago
mylann uploadedaphoto at Minn Lan @ Baho Street4years ago
mylann Minn Lan @ Baho Street4years ago
Writeareview for Minn Lan @ Baho Street
Report for Minn Lan @ Baho Street
Reserve table at Minn Lan @ Baho Street